ဂျီဩမေတြီသင်္ကေတ - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ•သင်္ကေတ၏တန်ဖိုးကို
ဂျီဩမေတြီသင်္ကေတကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အခ်ါအဓိပ်ပာယျနဲ့ knowability ရောက်စေဖို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်လျှောက်လုံးဉာဏ်ပညာကိုအစဉ်အလာတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆိုဒ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်မစ္စတာ Percival ရုပ်ပြသောကြယ်သင်္ကေတအချို့ပြန်ထုတ်ပေးနှင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြခဲ့သည့်အတွက်ပါပြီ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ။ သူကသူသို့မဟုတ်သူမအတွက်သင်္ကေတဆံ့သောအမှန်တရားမှာရောက်လာရန်သူတို့အထဲသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထင်လျှင်, ဤသင်္ကေတများလူ့အဘို့အတန်ဖိုးကိုကိုင်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအသင်္ကေတများသာဤကဲ့သို့သောအပင်တစ်ပင်သို့မဟုတ်လူသားတစ်ဦး၏တစ်ဦးကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်၏လူသိများအရာဝတ္ထုသို့ဆောက်လုပ်ထားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလိုင်းများနှင့်ခါးဆစ်၏ရှိရေးသောကြောင့်, သူတို့စိတ္တဇ non-Corporation ဘာသာရပ်များသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအပေါ်စဉ်းစားလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောသူတို့အတွက်န့ ်. အဖြစ်အရှင်ဝဠာ သာ. ဥပဒေများကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတရားမြားကျော်လွန် Non-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုံကိုနားလည်အတွက်ကူညီနိုင်ပါတယ် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny.
"ဂျီဩမေတြီသင်္ကေတပုံစံနှင့်ချဉ်ဆီသို့သဘာဝတရား၏ယူနစ်ကြွလာနှင့်ပြုသော၏တိုးတက်မှု, ကိုယ်ပိုင်အသိပညာမှပစ္စည်းများမှတဆင့်နှင့်အတွင်းနှင့်အချိန်နှင့်အာကာသကျော်လွန်သတိဖြစ်ခြင်းသို့ကိုယ်စားဖြစ်ကြသည်။ " -HWP
Percival တို့ကဒါဟာကြေညာချက်အမှန်ပင်ဝေး-ရောက်ရှိသည်။ သူသည်ဤသင်္ကေတ၏အခ်ါအဓိပ်ပာယျနဲ့အရေးပါမှုကိုရိပ်မိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကတဆင့်ကျနော်တို့ကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ကို unknowable ပုံရသည်သောအရာကိုသိနိုငျသညျဟုဖြစ်ပါသည် - ဘယ်သူသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဒီမှာဝဠာ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အစီအစဉ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ။ ။ နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။
တကျိပ်နှစ်ပါး Nameless အမှတ်၏စက်ဝိုင်း
Percival အတွေးအခေါ်ကိုပုံ VII-B ကပြောထားသည်နှင့်ဆယျ့နှစျ Nameless ၏စက်ဝိုင်းအတွင်း Destiny-အဆိုပါရာသီခွင်ထား-ဖြစ်ပါတယ်ဇာစ်မြစ်ကို, အပေါင်းလဒ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွကြယ်သင်္ကေတ၏အကြီးမားဆုံးသော။
"က၎င်း၏တကျိပ်နှစ်ပါးသောအချက်များနှင့်အတူစက်ဝိုင်း၏ပုံထုတ်ဖော်ပြသ, ထိုအစီအစဉ်နှင့်အခြေခံဥပဒေဠာ၏, ထိုသို့အတွက်အရာအားလုံးရာအရပ်ကရှင်းပြသည်နှင့်ထေူ၏။ ဒါက unmanifested အဖြစ်ထင်ရှားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ။ ။ ဤသည်မှာသင်္ကေတထို့ကြောင့်လုပ်-Up နှင့်အရာအားလုံးအထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပစပ်လျဉ်းလူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ၏စစ်မှန်တဲ့အနေအထားကိုပြသထားတယ်။ ဒါဟာမဏ္ဍိုင်သည် Fulcrum, ချိန်ခွင်လျှာဘီးနှင့်ယာယီလူ့ကမ္ဘာ၏ microcosm ဖြစ်ဖို့လူ့ဖြစ်လျက်ရှိပြသထားတယ်။ "
မစ္စတာ Percival ရဲ့အဆုံးမှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင်းသင်္ကေတ, ပုံဥပမာများနှင့်ဇယား၏ 30 စာမျက်နှာများပါဝင် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny.
တစ်ကြယ်သင်္ကေတများ၏တန်ဖိုးများတစ်ခုမှာအခြားသင်္ကေတများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစကားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမရနိုင်သောအရာကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့နှင့်အတူ သာ. Direct, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပြည့်စုံသည်။ HW Percival